အင်္ဂါ သားသမီးလေးတွေ အကြောင်း – Shwe Burma
အင်္ဂါ သားသမီးလေးတွေ အကြောင်း
အင်္ဂါတွေဟာ အပြင်ပန်း သဏ္ဍန် တည်ငြိမ် အေးဆေးစွာနဲ့ နေတတ်ကြပေမဲ့ အင်မတန်မှ ဒေါသကြီးတဲ့ နေ့နာမ်တွေ ဖြစ်ကြတယ်… မဟုတ်ရင် မခံချင်ကြဘူး။ ဒေါသဖြစ်ရင် အပြင်မှာ ပေါက်ကွဲကြတာထက် ပါးစပ်က ပူညံပူညံနဲ့ ရေရွတ်နေ တတ်ကြတယ်… လူတွေအပေါ် ဖော်ရွေစွာနဲ့ ခင်မင်တတ်ပါတယ်… ဝတ္တရား ပျက်ကွက်မိ ရင်လည်း အပြန်ပြန်အလှန်လှန် တွေးပူနေတတ်ကြတယ်…
မိသားစု တွေ အပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးချင်တဲ့ စိတ်တွေ ရှိကြတယ်… တည်ငြိမ် အေးချမ်းတဲ့ ပုံစံမျိုးပေမဲ့ တခါတလေ မိသားစုထဲမှာ ပေါကြောင်ကြောင် နိုင်တတ်ကြတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ သူများအပေါ် ဦးဆောင်လိုတဲ့စိတ် ရှိတယ်။ ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်အကောင်းလို့ ထင်မြင်တတ်ကြတာ အင်္ဂါ…
အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားတတ်ကြတယ်… အင်္ဂါတွေဟာ ကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝ ရှိတယ်. . တခါတရံ ကိုယ့်ကိုယ်ပင် ချီးမွမ်းတတ်တယ်.. သူများတွေ မြှောက်ပေးရင်တော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး.. အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်ကြတာ အင်္ဂါပါ။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ အပြုံးတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်. .
ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့လူ ဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့ မမေ့တတ်သလောက် ကိုယ့် အပေါ် မကောင်းတဲ့လူဆိုရင်တော့ တသက်လုံး ပြန်လှည့် မကြည့်တတ်ကြဘူး… အင်္ဂါတွေဟာ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အသည်းယားစွာနဲ့ ချစ်တတ်ကြတယ်.. အိမ်မက် ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ မက်ရင် သူငယ်ချင်းတွေကို သို့မဟုတ် မိသားစုထဲက လူတစ်ယောက်ယောက်ကို ပြန်လည်ပြီး ပြောပြချင်တတ်ကြတယ်. .
ဝမ်းနည်းစရာ တစ်ခုခုနဲ့ကြုံရင် မျက်ရည် လွယ်တတ်ကြတာ အင်္ဂါပါ… တော်ရုံနဲ့ မမေ့တတ်ကြဘူး။ သို့ပေမဲ့ မေ့ပြီးသွားရင်လည်း သူမဟုတ်သလိုပဲ အသစ်တဖန် ပြန်စတတ်ကြတယ်… သူများအပေါ်မှာ ကူညီပေးချင်တဲ့စိတ် အပြည့်အဝရှိတယ်… အားနာတတ်တယ်။ စကားပြောရင်လည်း သူများနားလည်အောင် ရှင်းလင်းစွာနဲ့ ပြောပြတတ်ကြတယ်… အမှတ်တရ တွေကိုတော့ တခုမကျန် မမေ့တတ်တာ အင်္ဂါပါပဲ… သီချင်းအေးအေးလေးတွေဆို တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ နေရာမှာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် နားကျပ်နဲ့ နားထောင်နေရတာတွေကို နှစ်သက်ကြတာအင်္ဂါပါ…
အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေဟာ အမြင်မှာ မထူးဆန်းဘူး ထင်ရပေမဲ့ တကယ် တော့ အများနှင့် မတူတဲ့အချက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ.. သူတို့ဟာ အနေအေးတယ်…. အရှက်အကြောက်ကြီးတယ်…စိတ်ရင်း ကောင်းသလောက် အားနာလည်း ကြီးတတ်ကြတယ်။ လူစိမ်းတွေနဲ့ဆို မာနကြီးသလိုလို နေတတ်ကြပေမဲ့ သူတို့နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ သူတွေနဲ့ကြတော့ ကလေးလေး တစ်ယောက်လို အမြဲ ပျော်ရွှင်နေတတ် ကြတယ်….
ရိုးသားကြတယ်…. များသောအားဖြင့် စကားနည်းတယ်… လူအများကြီး ရှေ့မှာဆို စကားသိပ်မပြော ပေမဲ့… သူတို့ ရင်းနှီးတဲ့ သူတွေနဲ့ဆို ဖောင်ဖွဲ့အောင် ပြောနေတတ် တဲ့သူမျိုး…. ရိုးရိုးလေး နေရတာကို သဘောကျတယ်.. ဒါပေမဲ့ ခေတ်နဲ့ လျော်ညီအောင်လည်း ဝတ်တတ် စားတတ် နေတတ် ထိုင်တတ်ကြတယ်..
အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းကြတယ်… ချစ်သူခင်သူလည်း ပေါတယ်… ချစ်သူရဲ့ အလိုလိုက်ခြင်းကိုလည်း ခံရတတ်တယ်.. တကယ်ချစ် တဲ့သူနဲ့ပဲ လက်ထပ်ရလိမ့်မယ်….. ရည်းစားမများဘူး ဆိုပေမဲ့ နှစ်ယောက် သုံးယောက် ထားပြီးမှ အချစ်စစ်ကို တွေ့လိမ့်မယ်… သူတို့ကို ခင်တဲ့သူ ပေါကြတယ်… အထူးသဖြင့် သူတို့လေးတွေရဲ့ ရိုးသားခြင်းကို သ ဘောကျပြီး မိတ်ဆွေပေါတာ ဖြစ်တယ်….
အနုပညာကို နှစ်သက်တယ် အရမ်းကြီးတော့ မရူးသွပ်ဘူး… ဘယ်အရာကိုဖြစ်ဖြစ် အရမ်းကြီး အစွဲအလန်းမထားဘူး… ဒါ့ကြောင့် သိပ်ပြီး မခံစားရတတ်ဘူး… အထူးသဖြင့် သူတို့လေးတွေက အလုပ်လုပ်ရမှာ ပျင်းတတ် ကြတယ်.. ဒါပေမဲ့ သူတို့ စိတ်ရှိတဲ့ အချိန်ဆိုလည်း မငြီးမငြူ လုပ်တတ် ကြတယ်…
အအိပ်မက်တယ် … အစားမကြီးဘူး ဆိုပေမဲ့ အသင့်အတင့် စားတတ်တဲ့သူမျိုး.. သူတို့လေးတွေဟာ အရမ်းရိုးသား ကြတဲ့အတွက် ချစ်စရာ ကောင်းကြတယ်… မိသားစုမှာ သူတို့လေးတွေက အရေး ပေးခံရတယ်… အထူးခြားဆုံးကတော့ သူများတွေထက် ရိုးသားတာ ကြောင့်… လူချစ်လူခင် ပေါကြတယ်…
Previous Article← သီရိဆွေရဲ့သားငယ်လေး ရက်(၁၀၀)ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကို သွားရောက်ခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သုဝေတို့သားအမိ
Next Articleခရစ်စမတ်အတွက် လည်လို့ကောင်းတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နေရာများ →
Total views : 20740